Uyikhangela njani imovie ungalazi igama | Ndinike ixesha lokuphola
Uyikhangela njani imovie ungalazi igama
UGabriela moran | | Cine
Kukho ingxaki yokuba nabona bahamba bhanyabhanya bahlala behlangana nabo ebomini ... Akunakwenzeka ukuba sikhumbule igama lefilimu nganye esiyibonileyo. Iindaba ezimnandi zezokuba Itekhnoloji inokunceda ukuvuselela inkumbulo yethu kwaye ufumane loo movie esithandayo kakhulu kuba sifuna kuphela ukubonisa ezinye izitshixo zokukhangela. Eli nqaku libonisa Isikhokelo esinyathelo-XNUMX sokukhangela imuvi ungalazi igama.
Khawufane ucinge ngale meko: ubuya ekhaya uvela emsebenzini kwaye into oyifunayo kukuphumla phambi kweTV kwaye ubukele imovie. Ukhangela kwiNetflix kwaye phakathi kokukhetha okunikezelayo awuyi kufumana nantoni na oyithandayo ... Kwangoko uyayikhumbula loo bhanyabhanya wayithandayo xa wawuyibona kumdlalo bhanyabhanya kwaye ushiywe ngumnqweno wokuphinda uyibone. Umlingisi ophambili ngumlingisi wakho omthandayo kwaye wakwenza wahleka ngokuvakalayo. Imele ukhetho olugqibeleleyo, nguwe kuphela ojongana nengxaki: Ngubani igama lemovie?
Sukubanexhala! ezi ntlobo zeemeko zinesisombululo esilula nesikhawulezayo. Ufuna nje imemori yakho encinci kwaye ube ne-intanethi.
Isikhokelo siqukethe la manyathelo alandelayo:
Qokelela ulwazi kangangoko
Jonga kwiinjini yokukhangela zikaGoogle
Sebenzisa imithombo yolwazi ekhethekileyo
Apha ngezantsi ndichaza nganye nganye ngokweenkcukacha ezithe kratya:
1 INYATHELO 1: Qokelela ulwazi kangangoko
2 INYATHELO 2: Jonga kwiinjini yokukhangela zikaGoogle
3 INYATHELO 3: Sebenzisa imithombo yolwazi ekhethekileyo
INYATHELO 1: Qokelela ulwazi kangangoko
Olu hlalutyo lincinci sisiseko kwaye oku ufuna inkxaso yememori yakho ukufumana injongo, sebenzisa le mizekelo ilandelayo:
Ngubani okanye ngubani na odlala iyelenqe
Kwesiphi isixeko apho ifilimu yenzeka khona
Umbono othile owukhumbulayo (Iidinosaurs -Iiirobhothi ezinkulu ezihlasela isixeko saseHong Kong. Isibini esikhwele emotweni sibaleka ngaphezulu komntu endleleni, njl.
Unyaka oqikelelweyo owawubona imovie
Ngabantu obukade uhamba nabo ngexesha lokuyibona kuba ingumthombo othe ngqo wolwazi onokuthi ukonge ixesha kunye nomzamo kukhangelo
Uhlobo lwemovie: uloyiko, uthando, ukuthandabuza
Ilizwe imvelaphi umboniso
Amabinzana athile othetha-thethwano kwifilimu
Izinto ezibalaseleyo kwindawo yesehlo (iiwotshi, iidayimani, izihlangu, uhlobo lwe-wardrobe, njl.
Imalunga Ukuqokelela idatha eninzi kangangoko ukuba unolwazi oluthile eya kuba luncedo kumanyathelo alandelayo.
INYATHELO 2: Jonga kwiinjini yokukhangela zikaGoogle
Kuyenzeka ukuba uyenze imibuzo elula kwiinjini yokukhangela ukufumana isihloko yefilimu esiyifunayo. Ilula kakhulu, kufuneka nje ukuba sizisekele kwinyathelo loku-1 kunye nemizekelo eboniswe ngezantsi:
Ngubani igama lebhanyabhanya apho uBruce Willis ngugqirha wenkwenkwe ebona iziporho? (Isithandathu Sense)
Ngowuphi umboniso bhanyabhanya isibini esincamisayo kwindawo yokupaka ngexesha lesiphango? (Idayari kaNowa)
Ngubani igama lemovie apho umbhali ohendayo etyholwa ngokubulala amaqabane akhe? (Ithuku elisisiseko)
Isihloko sefilimu ezidumileyo zika-Audrey Hepburn
Igama lemovie yaseSpain apho indoda ithatha abantwana bayo bayise esikolweni kwaye ifumanise ukuba imoto yayo inebhombu (Engaziwayo)
Yeyiphi eyona bhanyabhanya iphumelele kakhulu kumaxesha akutshanje?
Igama lefilimu eneenkwenkwezi uPenelope Cruz kunye nomnye umdlali weqonga apho baya eholideyini e-Barcelona kwaye bathandana nendoda enye (uVicky Christina Barcelona)
Kwiimeko ezininzi, ukukhangela imuvi yakho kungaphela apha. UGoogle uluncedo olukhulu kwaye unemiyalelo yokukhangela eyimfuneko ukufumana lonke ulwazi olufumanekayo.
INYATHELO 3: Sebenzisa imithombo yolwazi ekhethekileyo
Ukuba ufika apha, oko kuthetha ukuba umboniso bhanyabhanya owufunayo ubaluleke ngokukodwa. Nangona kunjalo, kukho izixhobo ezikwi-Intanethi eziza kukunceda ufumane imuvi oyifunayo. Ndichaza apha ngezantsi eyona mithombo yolwazi ifanelekileyo isetyenziswa kakhulu:
Yintoni imuvi yam? Yinjini yokukhangela ephuhliswe eFinland enjongo yayo ikukunceda umsebenzisi ukuba akhangele iifilimu esebenzisa amagama aphambili afakwe kwinjini yokukhangela ngokubanzi. La magama kufuneka abhalwe ngesiNgesi kwaye achaze inxenye yesiqwenga somxholo. Ulwazi olunenkcukacha luya kwenza ukuba ukukhangela kube lula. Enye yezona injini zokukhangela ezifanelekileyo kuba zenziwe ukucinga ngokuhlalutya ukulandelelana kwevidiyo. Umphuhlisi weqonga nguValossa kwaye ujonge ukubeka iwebhusayithi njenge "injini yokukhangela yokuqala esekwe kwimbali echazayo". Olunye lweempawu zalo eziphambili kukuba inesazisi somyalelo welizwi esifana naleya isetyenziswe kwiShazam naseSiri. Indawo ineefilimu ezingaphezulu kwama-45 amawaka kwiphothifoliyo yayo.
Ifilimu. Iphepha elenziwe eSpain ngumgxeki uPablo Kurt Verdú. Isebenza njengohlobo lwenethiwekhi yoluntu apho abasebenzisi banokwenza izindululo ngemovie ngokwenza uluhlu. Kubandakanya isiseko sedatha esikhulu esineefayile kwifilimu nganye ebandakanya i-synopsis, kunye nolwazi kumlawuli, umhla wokukhutshwa, iitreyila, uhlobo, amanani, amanqaku, njl. Esona sixhobo sikhulu sinikezelwayo lithuba lokuncokola nabanye abantu kwaye ufumane uluvo lwabo.
IMDB (Indawo yogcino bhanyabhanya ekwi-Intanethi). Ngomnye wemithombo yolwazi eyaziwayo ebaleni kwinqanaba lamazwe aphesheya, yadalwa ngonyaka we-1990. Inezilayishi, kunye nalo lonke ulwazi olunxulumene nefilimu. Nangona ingaboneleli ngophando olucokisekileyo njengenketho, unokuxhomekeka kukhangelo lweemovie ngumdlali weqonga kwaye ngokuqinisekileyo uya kulufumana uncedo.
Iiforam zeefilimu kunye neeblogi. Ngumthombo wolwazi olugqwesileyo kuba kukho inani elikhulu labantu abathatha inxaxheba kwiiforum kwaye bandise amathuba ngenxa yokuvuleleka abamele. Eminye imithombo yile ilandelayo: ICinemania, iiyure ezilahlekileyo, ifilimu iyonke, iBhlog de Cine kunye neTorrentfreak.
Ngokubanzi, uphando kufuneka lukhawuleze, nangona kunjalo kubalulekile ukuba ukhumbule ezinye iinkcukacha ze-movie ofuna ukunciphisa amaxesha ophando. Ndikucebisa ukuba uqaphele ukuze xa ulibale isihloko semovie ungasombulula ngokulula ingxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » Cine » Uyikhangela njani imovie ungalazi igama
Amagama eeNkosazana zeDisney